Kala dhalaalida ulolada: sababaha iyo cawaaqibta | Saadaasha Shabakadda
Kala dhalaal ulaha
Muddo dhawr iyo toban sano ah ayay hadda ka hadlayeen dhalaal at ulo waxaa keenay cimilada sii kululaaneysa. Celceliska heerkulka meeraha ayaa kor ugu sii kacaya illaa heer taas oo keeneysa dillaaca daboolka galka iyo dhalaalkiisa. Isbedelka Cimilada ayaa ah mid ka mid ah cawaaqibka degdegga ah ee kororka saameynta aqalka dhirta lagu koriyo. Xogta dhalaalistaani waa mid cabsi badan leh maadaama la ogaan karo in hawshu si xawli ah u socoto.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato dhalaalka ulaha.
1 Maxay dhalaalka ulaha micnaheedu tahay
2 Kululaynta Antarctic
3 Barafka Antarctica wuxuu kordhay 2012
4 Kala dhalaal ulaha iyo cawaaqibta
Maxay dhalaalka ulaha micnaheedu tahay
Markaan nidhaahno waxaa jira dhalaalidda tiirarka, waxay ka dhigan tahay in barafku ay barafku ka dhalaalayaan. Luminta barafka saliida biyuhu u rogto xaalad dareere ah ayaa sababa kororka heerarka badaha iyo badaha. Waa in lagu xisaabtamo in barafowga iyo dhalaalintu ay tahay geedi socod dabiici ah maaddaama dhulku leeyahay xilliyo kala duwan oo baraf iyo diirimaad. Si kastaba ha noqotee, waxa aan ka baqeyno maahan in dhalaal uu jiro wareegga dabiiciga ah ee meeraheenna, laakiin a Hawlaha la dedejiyey sababo la xiriira ficilada iyo waxqabadka aadanaha.
Dhibaatadu waxay tahay barafka dhalaalaya inuu ku dhacayo xawaare aad uga dheereeya sidii uu taariikhda oo dhan ugu dhacay wareegyada barafka iyo diirimaadka meeraheenna. Tan waxa u sabab dhaqdhaqaaqa weyn ee aadanaha ee keena qiiqa gaaska lagu sii daayo ee awooda u haynta kuleylka jawiga. Maaddaama kuleyl badan uu isa soo tarayo, heerkulka celceliska ayaa sii kordhaya iyo wuxuu keenaa dhalaalida koofiyadaha cirifka.
Dhalmadani waxay ina siineysaa dabiici ahaan waana in loo arkaa inay tahay dhibaato culus oo deg deg ah oo soo food saartay aadanaha iyo inta kale ee nool ee ku nool meeraha
Biyaha u rogay barafka ka jira Antarctica ayaa ka diirimaad badan celceliska adduunka. Waxaan ognahay in meeraha oo dhami ay kululaanayaan, laakiin ay meel walba ka kululaanayso. Aagga Antarctic ama South Pole wuxuu kuleylinayaa xawaare ka dheereeya inta kale sababo la xiriira wareegga suunka xamuulka. Suunka xambaarayaasha waa barokaca hawada ka soo qaada miisaanka hawadda ee ka soo baxa dhulbaraha iyo ulaha. Haddii cufnaanta hawadan ay ku jiraan gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo dhexdooda, waxay bilaabaan inay xoogga saaraan qaybta ulaha. Tani waxay sababtaa qaddar badan oo ka mid ah gaasaska lagu koriyo inay ulaha ka jiraan, in kasta oo ay si toos ah halkaas nooga sii baxayaan.
Antarctica waxay kordhineysaa celceliska heerkulka heer ah 0.17 darajo Celsius halka inta kale ay sameyso xawaare gaaraya 0.1 digrii sanadkiiba. Si kastaba ha noqotee, waxaan aragnaa dhalaal guud oo ku baahsan meeraha. Barafkan dartiis awgood, heerka badda wuxuu ka kacayaa adduunka oo dhan.
Waxaa jira xog kooban oo muujineysa kororka barafka ee Antarctica. Waxay u muuqan kartaa waxoogaa khilaaf ah inkasta oo ay jirto dhacdo dhalaasho oo baahsan oo socota. Isku soo wada duuboo, barafka badda ayaa yaraaday in kasta oo barafka Antarctic uu kordhay. Tani wuxuu si joogto ah u waday tan iyo 1979 waana in lagu daraa in Greenland iyo dhammaan glaciers-ka meeraha ku yaal ay sidoo kale lumeen. Sidaa darteed, waxaa la oran karaa iyadoo la hubo gebi ahaanba in dhulku uu ka sii dhammaanayo baraf uu boodbood iyo soohdinba u leeyahay.
Khasaaradan baahsan ee daboolka barafka dhulka waxay keeneysaa in dusha sare ka muuqato tamarta qorraxda oo yaraata. Tan waxaa loo yaqaan albedo. Albedo waa awooda dhulka inuu ku soo celiyo qeyb ka mid ah shucaaca qorraxda dhacdada dusha sare ee dibedda. Xaqiiqada ah in dhulku leeyahay albedo hoose ayaa ka dhigeysa diirimaadka adduunka mid aad u daran oo, sidaa darteed, hawsha waxaa dib loogu quudiyaa si dhakhso leh. Marka, dhalaalku wuxuu ku dhacaa xawaare sare. Waa in la sheegaa in tani ay saameyneyso heerka badda, taasoo keeneysa inay si dhakhso leh oo baaxad leh u kacdo.
In kasta oo ay jiraan xog kasta oo ay saynisyahannadu ka soo horjeedeen, haddana waxa jira caddayn cad oo aan ahayn oo keliya kululaynta adduunku laakiin ay xawaareyneyso xilliyadan dambe. Warbaahinta qaar waxay sii wadaan inay yareeyaan cawaaqibka isbedelka cimilada si ay diiradda u saaraan dhinacyada kale.
Barafka Antarctica wuxuu kordhay 2012
Tani waxay u egtahay xoogaa khilaaf ah in uu jiro baraf badan oo badda Antarctic ah. Saynisyahannadu waxay rumaysan yihiin in sababta dhacdadani tahay dabaysha. Waxaa jira isbeddello kala duwan oo ku saabsan barafka badda oo xiriir dhow la leh dabeylaha maxalliga ah. Waa sababta oo ah awoodda isbeddelaysa ee dabaylaha qabow ayaa ah waxa barafka ka qaada xeebta. Dabaylahaasi waxay awoodaan inay barafeeyaan biyaha. Waxaa sidoo kale xusid mudan in godka loo yaqaan 'ozone hole' ee kuyaala koonfurta adduunka uu saameynayo dhacdadan.
Inta badan barafka Antarctic xitaa dhulka. Waa dhul aad u ballaadhan oo daboolaya dusha sare ee dhulka oo laga ballaadhiyey badweynta ku wareegsan oo dhan. Go'aanka barafka ee 'Antarctic' ayaa sii yaraanaya celcelis ahaan 100 kiiloomitir kilomitir sanadkii.
Kala dhalaal ulaha iyo cawaaqibta
Ka soo horjeedka waa run ee Arctic. Inta badan halkan waa badweynta halka Antarctica ay ku wareegsan tahay dhul. Tani waxay ka dhigeysaa dabeecadaha kahor cimilada mid ka duwan. In kasta oo barafka sabeynaya uu dhalaaliyo, haddana saameyn yar ayuu ku leeyahay kor u kaca heerarka badda. Tani ma aha kiiska barafka barafka leh ama barafka Antarctic.
Xogtii ugu dambaysay ee ku saabsan dhalaalidda ulaha waxay muujinayaan in Antarctica ay leedahay mid ka mid ah baraf-weynaha ugu waaweyn ee loo yaqaan 'Tumatiga' oo dhalaalaya sababo la xiriira kororka heerkulka badda. Waxay lumiyeen xaddi badan oo baraf ah waxaas oo dhanna waxaa saameyn ku yeelan doona kor u kaca heerka badda. NASA waxay ku dhawaaqday inay umuuqato inaan gaarnay heer dhalashadii ulaha aan laga noqon karin.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto dhalaalka qotomiyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Kala dhalaal ulaha